kojakoja mpitaingina tselatra mpamokatra sy mpamatsy | Fitaovana fisamborana varatra avy any Shina Factory
Overhead amin'ny Indikator Fault
Jeneraly: Indiziona roa in-iray SJWL-SGFI / II fohy tamin'ny sampana fizaran-tany fa tsy fahombiazana matetika ny fitadiavana ny tsipika diso dia ny lozisialy mpiasan-dàlana amin'ny herinaratra mba hahitana lesoka amin'ny tany indraindray antsasaky ny andro, ny sasany manomboka amin'ny maraina raha hitady ny takariva, dia mila mahita andro vitsivitsy i Inner Mongolia. Noho izany, ny fametrahana mari-pamantarana diso dia afaka manatsara be ny fahatokisana ny famatsiana herinaratra, mampihena ny hamafin'ny asa, mampihena ny fotoana fahatapahan'ny herinaratra. Endri-javatra vokatra: Sho ...
Fanondroana ny tsy fahombiazan'ny karazana Panel
General: Ny sensor amin'izao fotoana izao sy ny sensor amin'izao fotoana izao dia mifandraika amin'ny vatan'ny tontolon'ny fitaovana amin'ny alàlan'ny fibre optique. Aorian'ny tsy fahombiazana. ny sensor dia mamindra ny famantarana amin'ny mpampiantrano mainframe tontonana amin'ny alàlan'ny fibre optika hitsara. Fametrahana toerana: • apetraka amin'ny fivoahana voalohany amin'ny tsipika lava misy ny tariby): azo tsaraina fa misy lesoka eo amin'ny gara na ivelan'ny tsipika; • Napetraka ao amin'ny mpampiasa ho ao amin'ny mpanova ...
manara-maso ny arrester ny tselatra
arrester monitor dia ampiasaina handraketana ny laharan'ny hetsika sy ny fivoahan'ny rano ankehitriny.
Counter Lightning Counter Lightning Counter
Ny Surge Counter dia mifandray eo ambanin'ny arrester amin'ny serial, no ampiasaina amin'ny firaketana ny ora fiasan'ny arrester. JS-8 karazana dia mpiray tsikombakomba amin'ny arrester 6KV -220KV. Ny toetoetran'ny tontolo iainana dia mifanaraka amin'ny takian'ny arrester, ohatra, ny haavony dia tsy mihoatra ny 4000m, ny mari-pana amin'ny tontolo iainana -40 Centigrade, ny kaontera dia tsy azo apetraka amin'ny toerana misy metaly fanalefahana entona sy faritra azo antoka, tena matotra fandotoana sy hovitrovitra mafy. Ny isa fanalefahana ...